तिलोत्तमाले तोक्यो गहुँको न्यूनतम समर्थन... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
तिलोत्तमाले तोक्यो गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार रुपैयाँ
सेतोपाटी संवाददाता बुटवल, चैत ३०
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ।
आइतबार बसेको नगरस्तरीय कृषि सञ्जालको बैठकले गहुँको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल तीन हजार रुपैंयाँ तोकेको नगर प्रमुख एवं सञ्जाल संयोजक बासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए। बैठकमा कृषि विज्ञ एवं अगुवा किसानहरु समेत सहभागी गराइएको थियो।
किसानबाट लागतअनुसारको लाभ प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो आइरहँदा नगरपालिकाले गहुँको समर्थन मूल्य तोकेको हो। तोकिएको मूल्यमा कुनै किसानको गहुँ बिक्री नभएमा त्यसको बजारीकरण गर्ने जिम्मा पनि नगरपालिकाले लिनेछ। समर्थन मूल्य तोकिएपछि बिचौलियाको मनोमानी हट्ने विश्वास गरिएको छ।
नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा १ सय ३६ मेट्रिक टन गहुँको बिउ किसानलाई ४० प्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो। अनुदानमा उन्नत बिउको उपलब्धतासँगै किसानहरुले बाँझो राख्ने खेतमा समेत पछिल्लो वर्ष गहुँ खेती गर्ने क्रम बढेको कृषि शाखाले जनाएको छ।
यो वर्ष नगरपालिकाभित्र २ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ खेती गरिएकोमा ६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने अपेक्षा गरिएको छ। यतिबेला नगरपालिकाको उत्तरी क्षेत्रका किसानले गहुँ खेती स्याहारिसकेका छन् भने दक्षिणी क्षेत्रका अधिकांश किसान गहुँ भित्र्याउने क्रममा छन्।
नगरपालिकाले वडा नं. १७ लाई गहुँको पकेट क्षेत्र तोकेको छ भने वडा नं. ११, १२, १३, १४,१६ मा समेत ठूलो क्षेत्रफलमा गहुँ खेती गरिएको छ।
माछामासुका पसल खोल्न समय तोकियो
यसैबीच कृषि सञ्जालको बैठकले लकडाउनको समयमा बिहान ६ देखि ८ बजेसम्म तथा साँझ ३ देखि ५ बजेसम्म माछामासुका पसल खोल्ने निर्णय गरेको छ।
कृषि शाखा प्रमुख दोमलाल भुसालले किसानले भोग्नुपरेका समस्याको समाधानका लागि माछामासुका पसल खोल्नका लागि समय निर्धारण गरिएको जानकारी दिए।
यसअघि नैं सोही समयमा दुधको खरिद—बिक्रीका लागि नगरपालिकाले समय तोकेको थियो। अत्यावश्यक सामान एवं तरकारीको खरिद—बिक्रीको लागि दिउँसो १२ देखि २ बजेको समय तोकिएको छ।
यस्तै नगरमा किसानले उत्पादन गरेको हरियो तरकारी तथा दूधको बजारीकरणका लागि तीन वटा सवारीसाधन भाडामा लिने निर्णय पनि समितिको बैठकले गरेको छ।
बैठकमा संघीय सरकारका कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले कृषिको विकासका लागि स्थानीय तहसँग माग गरेका सुझावको सन्दर्भमा समेत छलफल भएको कृषि शाखा प्रमुख भुसालले बताए।
प्रकाशित मिति: आईतबार, चैत ३०, २०७६, १९:२२:००